आज कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा पनि आजै - Kohalpur Trends
२९ कात्तिक, काठमाडौं । आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकैदिन परेको छ । सामान्यतया यमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार र तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा पर्छ । तर यस वर्ष तिथि घटबढका कारण कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
Previous Previous post: भनिन्छ २२३ वर्ष अघि यी देवीको आराधना गर्दा काठमाडौंमा म’हामा’रीको अ’न्त्य भएको थियो
Next Next post: ‘कात्तिक ३० गते लक्ष्मीपूजा शास्त्र विपरीत’